क्यान्सर अस्पतालमा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
क्यान्सर अस्पतालमा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना
२०७७ बैशाख १४, आईतवार १८:२८ गते
भरतपुर । कोरोनाको महामारीमा अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् । सरकारले पनि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा निरन्तर हाजिर भई लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ । तर, चितवनको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी अस्पताल नगई नै तलब पकाइरहेका छन् ।
लाजैमर्दो कुरा त के भने सरकारले लकडाउन भनेको दिनदेखि हालसम्म एकदिन पनि अस्पताल नपुगेका कर्मचारी पनि क्यान्सरमा छन् । डिजिटल हाजिरी प्रणाली रहेको क्यान्सर अस्पतालमा कोरोनाको डरले यस्तो हाजिरी हटाइयो ।
सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई अस्पताल आए र नआएको जानकारी गराएकै भरमा हाजिरी भएको मान्यता दिने भनी अस्पताल प्रशासनले सूचना दिएपछि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको आसपास रहेकाहरूले अस्पताल नै नगई सेवासुविधा लिइरहेको अस्पतालकै अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
लकडाउन भएको दिन चैत ११ गतेबाटै यस अस्पतालमा ओपिडी बन्द छ । भर्ना भएर बसेका बिरामीहरू पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै धमाधम डिस्चार्ज गरी पठाइए । अस्पतालमा अहिले ३० जनाजति बिरामी भर्ना भएर सेवा लिइरहेका छन् । यो ४ सय ५० बेडको अस्पताल हो ।
क्यान्सर अस्पतालमा स्थायी र करार गरेर कर्मचारी ७ सय जना छन् । मुस्किलले सय जना पनि दैनिक अस्पताल पुग्दैनन् । केही काठमाडौँमा बसेर मौखिक हाजिर गराएर तलब खाइरहेका छन्, कोही लकडाउनपछि अस्पतालमा देखा परेका छैनन्, तर हाजिरीमा उपस्थिति देखाइएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले क्यान्सर अस्पतालमा पछिल्ला समय भइरहेको बेथितिबारे भन्छु तर नाम सार्वजनिक नगरियोस् भनी दिएको जानकारीअनुसार विभागीय प्रमुख, प्रशासन र कार्यकारी निर्देशकको नजिक रहेकाहरूले काम नै नगरी सुविधा लिइरहेका छन् ।
कर्मचारी ज्यालादारीमा भर्ना
यस अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्य अबको केही दिनमै पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदैछन् । अस्पतालमा सरकारी सेवासुविधा खाने स्थायी कर्मचारी कामै नभएर घरमा बसिरहँदा दैनिक ज्यालादारीका मान्छे काममा बोलाइएका छन् ।
अस्पताल सुनसान हुँदा दैनिक काम नै नपर्ने अवस्थामा किन बोलाइए ती कामदार ? भन्ने प्रश्न गर्दा कार्यकारी निर्देशकले यो बेला कर्मचारी आए र नआएको, को स्थायी र को ज्यालादारी भनी बहस गर्ने समय नभएको बताए ।
लकडाउनअघि ३९ जना दैनिक ज्यालादारी रहेकोमा लकडाउनपछि १३ जना थप भएका छन् । कार्यकारी निर्देशकले जाँदाजाँदै केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई रिझाउन पदको दुरुपयोग गरेर कर्मचारी राखेको अन्य कर्मचारीको आरोप छ । अनावश्यक दैनिक ज्यालादारीको भर्नाबाट भएका आर्थिक व्ययभारबारे जानकार रहे पनि उनले भर्ना रोकेका छैनन् । राजनीतिक पहुँच र केही ठूला शक्तिको आडमा ज्यालादारीमा जागिर खाएकाहरू काममा नआई दैनिक ज्याला भने बुझ्ने गरेको स्थायी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सेवा दिइरहेका छौँ : कार्यकारी निर्देशक
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विजयचन्द्र आचार्यले लकडाउनमा पनि उपचारका लागि आएका बिरामीहरूलाई नफर्काइएको बताएका छन् । कोरोनाको जोखिमका कारण देश लकडाउन भइरहेका बेला अत्यावश्यक नपरी अस्पताल नआउन आग्रह भने गरिएको उनले बताए ।
‘कुनै पनि सेवाहरू बन्द गरेको अवस्था होइन, बिरामीहरू नै कम आउनुभएको छ’, उनले भने, ‘बाहिर सबै होटलहरू पनि बन्द छन्, हाम्रोमा आउने बिरामीहरू बस्न पनि पाउँदैनन् । सबै बिरामीहरू भर्ना भएर बस्ने भन्ने पनि हुँदैन ।’ अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई ओपिडीबाट नै सेवा दिने योजना बनेको उनले बताए । एक–दुई दिनमा नै यस किसिमको सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
लकडाउनको समयमा पनि दैनिक सय जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारका लागि आइरहेको उनी बताउँछन् । बिरामीहरूको रेडियोथेरापी, केमोथेरोपी, इमर्जेन्सी अपरेसनलगायतको उपचार भइरहेको उनले बताए । दैनिक करिब ५० भन्दा बढीको रेडियोथेरापी, दैनिक ५० देखि ६० जना इमर्जेन्सीबाट आएका बिरामीहरूको केमोथेरापी र अन्य सेवा दिने काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।